Nicky VERSTAPPEN မာတင် Vrijland
အမှု Nicky Verstappen ပေတရု R. က de Vries မှအိတ်ဖွင့်ပေးစာ
အတွက် Filed Nicky VERSTAPPEN	by မာတင် Vrijland	ဒီဇင်ဘာလ 13 2018 အပေါ်	• 13 မှတ်ချက်
အချို့စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်အတူပတေရုသ R. က de Vries, ချစ်ခင်ရပါသော, ငါသည် Jos Brech အမှန်တကယ်လူသိရှင်ကြားပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့ဘယ်မှာမီဒီယာ Nicky Verstappen ကိစ္စတွင်အားဖြင့်ရုံးတင်စစ်ဆေးနောက်တော်သို့လိုက်ကြပြီ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့: ငါ Jos Brech တစ်ထောက်ခံသူမျှမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကလေးကဗလက္သို့မဟုတ်လူသတ်မဟုတ်ဖြစ်၏။ ဒါဟာပုံရသည်, သို့သော်, ပြင်းပြင်းထန်ထန် [ ... ] သောဤအမှုတစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပြု
နွေရာသီအပြီးသည်အထိ psyop တရားစွဲဆိုမှုပစ္စည်းဥစ္စာ 2019: ပဲ့ထိန်းများအတွက် Jos Brech
အတွက် Filed Nicky VERSTAPPEN	by မာတင် Vrijland	ဒီဇင်ဘာလ 12 2018 အပေါ်	• 10 မှတ်ချက်
tweets ကြေးနန်းသတင်းထောက် Saskia ဆော်များ၏တိုက်ရိုက်စီးကြောင်း Nicky Verstappen (ဖြစ်နိုင်ခြေ) psyop အရာယနေ့တစ်ရပ်အစောင့်အကြပ်ထက်ပိုဘာမျှကြောင်း။ Jos Brech ကလေးကမိမိအကို PC ပေါ်တွင်ရှိသည်ဖို့ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူ့ကိုယ်ပိုင်စကားများဗိုင်းရပ်စ်များကဆောင်ခဲ့သောဝန်ခံကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းအချို့ tweets ရှိပါတယ်။ Jos [ ... ]
ရဲတပ်ဖွဲ့ 33 နှစ်ကြာပြီးနောက်ရုတ်တရက်ဟောင်းဖိုင် Jos Brech ကိုရှာဖွေမည်!
အတွက် Filed Nicky VERSTAPPEN, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	နိုဝင်ဘာလ92018 အပေါ်	•0မှတ်ချက်
ဒါဟာငါ့ကိုခဏတစ် ယူ. သင်တန်းကတစ်ခုမဖြစ်နိုင်အလုပ်တခုကိုခဲ့ပေမယ့်သူကအသက်မပြည့်သေးယောက်ျားလေးများနှင့်အတူဖောက်ပြန်ကျူးလွန်ဘယ်မှာ Jos Brech ၏အဟောင်း file ကိုရုတ်တရက်ရှိ၏။ အဲဒီအမှုကိုပယ်ချခဲ့သည်သို့မဟုတ်ဆိုင်းငံ့ထားပေမယ့်အရေးမပါဘူးခဲ့သည်။ ပတေရုသ R. က de Vries [ ... ] အပေါင်းတို့သည်သူ၏အဆက်အသွယ်နှင့်အတူလိုက်စားခဲ့ပြီး
လူသတ်မှု၏ဖြေရှင်းနည်းအပြင်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားရေးဒေတာဘေ့စများ၏အပြုသဘောဆောင် DNA ကို
အတွက် Filed Nicky VERSTAPPEN, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	26 စက်တင်ဘာလ 2018 အပေါ်	• 11 မှတ်ချက်
၏သင်တန်း, နယ်သာလန် Nicky Verstappen ကိစ္စတွင် Jos Brech ၏ဖမ်းယူခြင်းမှဦးဆောင်သည်ဟုအလွန်စိတ်သက်သာရာ။ အစောပိုင်းက DNA ကို Marianne Vaatstra အမှု၌ဂျက် Steringa ၏ဖမ်းယူခြင်းမှဦးဆောင်, ဒါကြောင့် DNA ကိုရလဒ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာနိုင်ငံရဲ့သတင်းစာပညာသူရဲကောင်းပတေရုသ R. က de ခြင်းဖြင့်မိတ်ဆက်အသစ်တစ်ခုကိုဥပဒေစနစ်ကိုဖန်တီးထားပြီး [ ... ]
Gerald Roethof PSYOP ကိစ္စတွင် Jos Brech အတွက်ရှေ့နေဖြစ်ပေါ်လာသက်သေပြ
အတွက် Filed Nicky VERSTAPPEN, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	25 စက်တင်ဘာလ 2018 အပေါ်	• 8 မှတ်ချက်
အကြီးအမီဒီယာအာရုံစိုက်မှုရရှိခဲ့တဲ့အများစုမှာတာရှည်-running လူသတ်မှုဖြစ်ပွားမှုသည့်မှော်စကားလုံး DNA ကိုအတူဖြေရှင်းနေကြသည်။ ကောင်းပြီ, သူတို့ကလူသိရှင်ကြားတစ်ဦးသင့်လျော်သောဥပဒေရေးရာ cogent ကာကွယ်ရေးမပါဘဲဆွဲထား၏တရားကိုကျော်ယူတရားရုံးမီဒီယာဆပ်ကပ်ရွှေ့ပြီးတော့ပတေရုသ R. က de Vries နေဖြင့်မီဒီယာအားဖြင့်ရုံးတင်စစ်ဆေးမှတဆင့်ဖြေရှင်းနေကြသည်။ [ ... ]
ဘယ်လိုမီဒီယာဝေဖန်ဆန်းစစ်မှာသူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်း set နဲ့သူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းယုံကြည် (Jos Brech) spinning Continue
အတွက် Filed Nicky VERSTAPPEN, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	24 စက်တင်ဘာလ 2018 အပေါ်	•3မှတ်ချက်
အချို့သောအံ့သြစရာနှင့်အတူ, ငါပေးသောရှေ့နေ Jos Brech, Gerald Roethof ငါနေ့ထုတ်လွှင့်ရှေ့တော်၌ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဆောင်းပါးမှတိကျစွာ attuned ကသူ၏ဇာတ်လမ်း, ဒေါင်းအလံ၏ပြန်ကန်စောင့်ကြည့်။ အလွန်ဒီကဗျာစားပွဲပေါ်ကြောင်းရုတ်တရက်နှစ်ခုလုံးဝအသစ်သောအားသာချက်များရှိခဲ့သည်။ ယင်းအပေါ်နောက်ဆုံးတော့သောနယူးပိုင်ဆိုင်မှုများကို [ ... ]
Jos Brech psyop - Nicky Verstappen အတွက်အောက်ပါလှည့်ဖျား? ကလေးညစ်ညမ်းတွေ့ရှိခဲ့!
အတွက် Filed Nicky VERSTAPPEN, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	20 စက်တင်ဘာလ 2018 အပေါ်	• 12 မှတ်ချက်
OM ကဲ့သို့သင်တို့တစ် PSYOP (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေး) မှတဆင့်အသစ်သောအစီအမံများအတွက်လူတွေပြင်ဆင်ထားရန်နှစ်ပေါင်းရှိပါက, ထို့နောက်၏သင်တန်းသင်စိတ်မသာညည်းတွားအတွက်ဇာတ်လမ်းပိုင်ခွင့်ရာထူးအတွက်မှန်ကန်သောကိန်းဂဏန်းများကိုဆက်လက်ရှိသည်သေချာအောင် ပင့်ကူ။ ဒါက [ ... ] သင်တစ်ဦးအားလျော့ကြဆိုလိုတယ်
အဘယ်ကြောင့် Jos Brech ဒါလျှို့ဝှက်ပို့ဆောင်ခဲ့သလဲ
အတွက် Filed Nicky VERSTAPPEN, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	6 စက်တင်ဘာလ 2018 အပေါ်	•2မှတ်ချက်
Jos Brech, Nicky Verstappen ၏စွပ်စွဲလူသတ်သမားနှင့်အကြမ်းဖက်န်းကျင်ဇာတ်လမ်း, ကြီးသောအထွဋ်မှဖောင်းနေသည်။ မနေ့ကသူတစ်ဦးပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်နှင့်အတူနယ်သာလန်ပို့ဆောင်ခံခဲ့ရသည်။ ဒါဟာဘယ်အရာကိုကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်နိုင်သည်! ကျနော်တို့အချိန်မရွေးသည်သူ၏မာဖီးယားဂိုဏ်းအဆွေခင်ပွန်းလွတ်မြောက်နိုင်သူတစ်ဦးလေယာဉ်အန္တရာယ်မူးယစ်ဆေးအရှင်ကိုအကြောင်းပြောနေတာကြောင့်တစ်ဦးကစီစဉ်ထားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုမနိုင်။ [ ... ]
အတွက် Filed Nicky VERSTAPPEN, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	သြဂုတ်လ 30 2018 အပေါ်	•3မှတ်ချက်
DNA ကိုဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်လူတိုင်း၏အသစ်ကမှော်လမ်းအကြောင်းကိုစိတ်အားထက်သန်ဖြစ်ပါတယ်! DNA ကိုတကယ်ပဲသည်သင်၏အားလုံးဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။ သင်၏အိမ်နီးချင်းသေပြီတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နှင့် DNA ကိုသူမ၏အဝတ်ဖြစ်ထွက်လှည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာ, ပြီးတော့ကျနော်တို့ကိုချက်ချင်းလူသတ်သမားဘယ်သူလဲသိ! ဒါက [ ... ] အမှန်နည်းပညာအတွက်အောင်မြင်မှုများဖြစ်ပါသည်
Jos Brech PSYOP - Nicky Verstappen အတွက်လူသတ် Making
အတွက် Filed Nicky VERSTAPPEN, NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	သြဂုတ်လ 29 2018 အပေါ်	• 1 မှတ်ချက်
တစ်ဦးလူသတ်မှု 's ပြုလုပ်ခြင်းအဆိုပါ Netflix ဟာစီးရီး "လူတွေအယူမှားကောက်ချက်၏အခြေခံပေါ်မှာတာရှည်ဖမ်းမိရနိုင်ပုံကိုပြသသည်။ အဘယ်မှာရှိကြောင်းစီးရီးအတွက် DNA ကိုမကြာခဏရှေးအချက်, DNA ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အဖွင့်တဲ့လူသတ်မှုပြုလုပ်ခြင်းအခြေစိုက်ထားတဲ့အပေါ်သစ်ကိုမူအရဖြစ်နိုင်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေး (PSYOP) တွင်သင်သည် [ ... ] သေချာအောင်